Nyocha nke Huawei Nova Plus, ngwaọrụ nke ga-eju gị anya Gam akporosis
Huawei juru site n'igosi ya ezinụlọ ọhụrụ Nova n'oge ngosi ya na mbipụta ikpeazụ nke IFA na Berlin. A usoro nke ọnụ, na Huawei Nova na Huawei Nova Plus, nke dị ugbu a na etiti elu nke mpaghara ahụ.
N'oge ahụ anyị egosịla gị ngosi mbụ anyị mgbe anwalechara Huawei Nova Plus na IFA 2016, ugbu a ọ bụ oge ime a nyocha zuru ezu nke Huawei Nova Plus mgbe ọnwa ejirila. Ekwentị nke hapụrụ anyị ezigbo mmetụta na nke ahụ ga-abụ onye na-akwụsi ike iji chịkwaa etiti etiti ahịa.
1 Nzube nke na-adọta anya niile na oke ya
2 Njirimara teknụzụ nke Huawei Nova Plus
3 Ihuenyo zuru oke nke HD karịa karịa atụmanya
4 EMUI 4.1 dabara Huawei Nova Plus nke ọma
5 Batrị na-adịgide ma na-adịgide
6 Igwefoto na-enwu na elu nke kacha mma
6.1 Ihe nlere igwefoto emere na Huawei Nova Plus
7 Nkwubi okwu ikpeazụ
8 Ihe osise ihe oyiyi Huawei Nova Plus
9 Uche ederede
10 Isi ihe na ihu ọma
11 Ihe megide
Nzube nke na-adọta anya niile na oke ya
Huawei na-aga n'ihu nzọ na onyinye ọnụ na njedebe kachasị elu na Huawei Nova Plus bụ ihe atụ ọhụrụ banyere ya. Ọnụ ya nwere akụkụ nke aluminom nke na-enye ngwaọrụ mma mma.mgbasa. Mmetụta dị n'aka dị ezigbo mma Na agbanyeghị na ọla edochara, ekwentị anaghị amị amị amị, ihe masịrị m ebe ọ bụ na m chọrọ iburu ọdụ ndị a na-enweghị mkpuchi.
Rịba ama na m na-anwale ekwentị maka otu ọnwa na ahụbeghị ahụhụ ọ bụla ọ bụ ezie, dịka m gwara gị, m na-eji ya na-enweghị mkpuchi. O yiri ka ọdụ ụgbọ ahụ enweghị nsogbu. Rịba ama na, n'agbanyeghị na ọ nwere ihuenyo 5.5-inch, Huawei Nova Plus bụ ekwentị dị mma.
Ihe nzuzo dị na obere akụkụ ya ka ọ bụrụ phablet: Huawei Nova Plus Jikwaa 151.8 x 75.7 x 7.3mm n'ihi ya, ọ dị nnọọ ka Samsung Galaxy S7 Edge. N'ezie, ọ bụrụ na i nwere obere aka ị ga-achọ aka abụọ iji ya. Anyị enweghị ike ichefu ịdị arọ ya dị 160 gram, ọ bụ ihe rụzuru na-atụle ogo na ihe eji wuo ekwentị ahụ.
Ejiri nke ọma n'ihu. N’ụzọ dị otu a, Nova Plus nwere ụfọdụ obere obere osisi àjà a nyocha ihuenyo nke 72.6% tụnyere n'ihu nke ọnụ. Na elu anyị na-ahụ igwefoto n'ihu megapixel 8, ebe anyị ga-ahụ ala nke aha ahụ na ala.
Ka anyị gaa n’ihu n’ikwu banyere akụkụ nke ọnụ ahụ. N'akụkụ aka nri nke Huawei Nova Plus onye na-emepụta ihe ejirila ma njikwa olu na ekwentị gbanye ma gbanyụọ bọtịnụ. Mkpọchi ahụ na-enye ụzọ karịrị ụzọ ziri ezi, na mgbakwunye na inye nnukwu mmetụta nke ịdịte aka. Dị ka ọ dị na mbụ, bọtịnụ ike nwere mkpịsị ike iji dị iche na igodo njikwa olu.
N’akụkụ ala bụ ebe mmepụta igwe okwu, igwe okwu na Ọdụ USB Type-C, mgbe akụkụ dị elu bụ ebe anyị ga-ahụ ihe mmepụta maka jaak 3.5 mm. N'ikpeazụ, akụkụ aka ekpe bụ ebe ha chọtara tray iji tinye kaadi SIM nano na kaadị micro SD.
N'ịga azụ, anyị na-ahụ Huawei Nova Plus nwere ikuku na Huawei Mate 8. Nhazi nke igwefoto na ihe mmetụta mkpịsị aka, nke nwere ụdị akụkụ ahụ, na-echetara nnukwu ihe nrụpụta ahụ. Ihe ichere ma ọ bụrụ na anyị echee na Nova Plus na-agbanye otu igwefoto dịka nwanne ya nwoke nke okenye.
Na ala na elu nke azụ ị ga-ahụ ụfọdụ ihe nkedo plastik nke bu ebe onye n'edoputa ya. M onwe m na-amasị imewe ji Huawei P9, HTC One M10 ịke, ma m na-aghọta na a ufọt ufọt nso ọnụ ha ga-ebelata akwụ ụgwọ ebe.
N'ikpeazụ, kwuo okwu na gburugburu ekwentị ahụ na-eme ka iji Huawei Nova Plus nwee ntụsara ahụ. Na nkenke, a imewe na-eso akara akara na ndị ọzọ ọnụ nke ika na na-abanye site na anya, karịsịa mgbe ị na-bulie ekwentị na-achọpụta na àgwà nke ya okokụre.
Agam agwa gị ugbu a na n'oge m na-anwale ya, enweghị m nsogbu ọ bụla na ya, ọ naghị ewe m ogologo oge iji mee ka ogo ya mara ya ma mee ike kachasị ọnụ na ogo nke ya na ihuenyo na-enwe multimedia ọdịnaya na vidiyo egwuregwu na-enweghị nsogbu ọ bụla. More ma ọ bụrụ na anyị na-echebara ihe nnwere onwe dị ịtụnanya nke Huawei Nova Plus, dị ka ị ga-ahụ ma e mesịa.
Njirimara teknụzụ nke Huawei Nova Plus
Huawei Nova Gụnyere
Akụkụ 151.8 x 75.7 x 7.3 mm
Ibu ibu 160 grams
Usoro njikwa Android 6.0.1 Marshmallow n'okpuru EMUI 4.1 omenala oyi akwa
Ihuenyo IPS 5.5 sentimita asatọ na mkpebi 1.920 x 1.080 pikselụ na 401 dpi
Nhazi Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 na asatọ 53 GHz Cortex A2.0 isi
Nchekwa n'ime 32 GB gbasaa site na MicroSD ruo 128 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 16 megapixels nwere f / 2.0 27 mms / OIS / autofocus / nchọpụta ihu / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p ndekọ vidiyo na 30fps
Igwefoto ihu 8 MPX / vidiyo na 1080p
Njikọ DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / FM redio / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Ndị 3G (HSDPA800 / 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - NXT-L29 NXT-L09) 4G band (1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 6 (900) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 26 (850) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) - NXT -L29) / HSPA ọsọ 42.2 / 5.76 Mbps na LTE Cat6 300/50 Mbps
Atụmatụ ndị ọzọ ngwa Nchaji usoro / mkpisiaka mmetụta '/ Cdị C ọdụ ụgbọ mmiri
Batrị 3.340 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Ahịa Euro 372 dị na Amazon
Ọ bụ ihe ijuanya na Huawei ekpebighi ịzọ nzọ nke aka ya iji nye ezinụlọ Nova ọhụrụ ndụ, mana m ga-ekwu na Snapdragon 625 tinyere 3 GB nke RAM ha na-ekwe ka Huawei Nova Plus na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọnụ na-arụ ọrụ nke ukwuu were wereỌ naghị ata ahụhụ site na jerks na, dịka ị nwere ike ịhụ na nyocha vidio anyị, Huawei Nova Plus nwere ike ịmegharị egwuregwu ọ bụla, n'agbanyeghị ole eserese ọ chọrọ, na-enweghị nnukwu nsogbu.
HaMkpisiaka mmetụta na-esochi nke ndị ọzọ Huawei ụdị àjà ịrịba na zuru okè omume ọsọ. Ọ na-achọpụta mkpịsị aka anyị n'oge mbụ site na ịmeghe ihuenyo na oge a. Nke a bụ otu n'ime nkọwa m masịrị m nke ukwuu gbasara ọdụ ndị ika ahụ ebe ọ bụ na ihe mmetụta biometric ya bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'ahịa. Na mgbakwunye, ọnọdụ nke onye na-agụ mkpịsị aka, n'azụ, na-enyere aka iji ya.
Iji tinye ya, ọkà okwu nke dị na ala na-akpọ anyị ka anyị kpuchie ya mgbe ị na-eji egwuregwu, ihe otiti n'ọtụtụ ekwentị ndị dị elu ma nke ahụ nwere ngwọta siri ike. Ma ọ dịkarịa ala àgwà ọdịyo dị ezigbo mma, na-akpọ anyị òkù ka anyị hụ ọdịnaya ọdịnaya. O yiri ka Njikọ aka na Harman Kardon adabara Huawei Nova Plus.
Ihuenyo zuru oke nke HD karịa karịa atụmanya
The Huawei Nova Plus gbakwunyere a 5.5 inch IPS panel Ọ na-enweta mkpebi HD zuru ezu (1920 x 1080 pikselụ) na njupụta nke ihe 401 pikselụ kwa inch. Mkpebi na-ahazi n'ahịa dị n'etiti etiti elu na nke ahụ ezughi oke.
na agba dị mma nkọ ya na uzo di nma karie ma nwekwaa ndu nke ruru ndu. Na mgbakwunye, dị ka ọ dị na mbụ na njedebe nke ika ahụ, anyị nwere nhọrọ iji dozie ọnọdụ agba agba ka ọ dabara onye ọrụ ahụ, na-enye ntọala abụọ ahaziri ahazi (otu oyi na ndị ọzọ na-ekpo ọkụ). Enwere m mmasị na nke sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ebe ọ bụ na ọ nọpụ iche, mana ọ dị mma na anyị nwere ike ịhazi oke a.
Banyere nchapụta, 450 nits Site na nke onye nrụpụta nwere, ha karịrị karịa atụmanya, na-enye ọkwa karịa zuru oke na gburugburu ebe obibi ọ bụla. Mgbanwe akpaka na-ada ada mgbe ụfọdụ, mana ọ na-efu ihe ọ bụla iji dozie nchapụta aka.
Kwuo na el Huawei Nova Plus na-eme nke ọma n'èzí, anyị nwere ike ịhụ ọdịnaya nke ihuenyo ahụ na anwụ na-acha anwụ na-enweghị nnukwu nsogbu, ọ bụ ezie na ọ naghị eru nkọ nke a hụrụ na ọdụ ndị ọzọ. Mana na-atụle na ọ bụ nnukwu etiti, nchapụta ahụ ezughi oke.
Banyere nleleIhe ndị a karịrị nke ziri ezi, ọ bụ ezie na ntakịrị ncha ọkụ na-efu, ha anaghị agafe ihe a na-emebu, yabụ na ọ gaghị ewe iwe mgbe ejiri ya.
M na-agụkarịkarị n'abalị ma na-enwe mmasị na ọnọdụ "nchedo anya", nke dị na ngalaba ntọala na elu. Ụzọ a Nkasi Obi nzacha-acha anụnụ anụnụ ìhè dochie visual ike ọgwụgwụ, otú ihuenyo ga-hụrụ na a ọzọ-acha ụda. Nhọrọ m jirila ọtụtụ ihe wee dị m mma, ọ bụ ezie na ị ga-eji ụda ihuenyo ọhụrụ ahụ mee ihe.
N'ezie, ozugbo iji ya mee ihe, ọ bụ ngwá ọrụ magburu onwe ya. Ọbụna m na-eji ọnọdụ a iji nwee ike ịgụ nkasi obi mgbe m na-eme njem n'ụgbọ njem ọha, ka echiche wee mara gị ahụ. Na mmechi, ihuenyo nke Huawei Nova Plus karịrị akarị, karịa ị nweta atụmanya nke imirikiti ndị ọrụ.
EMUI 4.1 dabara Huawei Nova Plus nke ọma
Ruo obere afọ gara aga, EMUI bụ ezigbo oyi akwa na nke ahụ metụtara onye ọrụ ahụ ntakịrị, mana ugbua na Honor 7 achọpụtara m ezigbo mgbanwe na akụkụ a. Ugbu a na mbata nke EMUI 4.1 na-akwado mmezi agam n’ihu omenala Huawei.
Dị ka ọ dị na mbụ EMUI enweghị ngwa drawer Kama nke ahụ, ọ na-eji sistemụ desktọọpụ nke iOS. Banyere ihe ndị na-amasị agba, onwe m na-enwe mmasị na sistemụ a nke ukwuu ma ejiri m ya nke ọma, yabụ enweghị m ihe ịkatọ. Window nkwuputa na-enye anyị ohere, site na swipe ala mbụ, iji gosi usoro ụzọ mkpirisi anyị nwere ike isi hazie aka anyị iji họrọ nhọrọ ndị anyị kacha eji.
Ọ bụghị ọtụtụ ngwa arụnyere tupu abịaAnyị nwekwara ike iwepụ ha n'enweghị nsogbu, yabụ enweghị ihe m ga-akatọ. Achọpụtala m nkwonkwo mkpịsị aka nke bara uru iji rụọ ọrụ dị iche iche. Ga-akwụrịrịrịrị ya, agwalarị m gị na ọ na-esiri m ike, mana ozugbo ị ghọtara usoro ahụ nke ọma ọ bara ezigbo uru, ọkachasị nhọrọ ịpị okpukpu abụọ iji nweta nseta ihuenyo ma ọ bụ see akara na ihuenyo ahụ rụọ ọrụ multi-window mode.
N'akụkụ a, ọ bụ ezie na ọ masịrị m ezigbo gam akporo karịa ebe ọ bụrụ na achọrọ m ịhazi m ga-achọ ezigbo onye na-ebupụta ihe, kwuo na EMUI 4.1 na-eme nke ọma na-enye mgbakwunye nke mbụ yana usoro mmegharị ya na mkpịsị aka.
Batrị na-adịgide ma na-adịgide
Na mpempe akwụkwọ, ndị 3.340 mAh batrị O zuru ezu iji kwado oke ngwongwo nke Huawei Nova Plus na mgbe ọ gara n'ihu na ọ hapụrụ m ezigbo anya. N'ụbọchị nkịtị Abiala m n'ụlọ na mkpokọta batrị 40%, ihe m na-amabeghị na nke masịrị m nke ukwuu. Iji nweta echiche ahụ, ụbọchị nke m nyekwuru ike na ekwentị na-ekpori ndụ egwuregwu vidio chọrọ nnukwu mmefu nke akụ, ekwentị ejirila batrị 25 -30% mechie ụbọchị.
Ọ bara ezigbo uru na ngwaọrụ ga-adọ aka na ntị site na ndabara nke ngwa ndị na-ewe oke na-akpọ anyị ka anyị mechie ya, ihe bara ezigbo uru iji chekwaa ntakịrị ihe na obodo kwụụrụ ekwentị. Anyị nwere ike ịhazi oke a n'aka site na ịmepụta ndepụta nke ngwa ndị a na-agaghị ekwupụta maka ọtụtụ oriri ha na-emepụta. Dịka ọmụmaatụ, enwere m WhatsApp, Spotify na egwuregwu m na-eji ọtụtụ na ndepụta ọcha a.
Bịanụ gịnị Batrị nke Huawei Nova Plus bụ otu n'ime ike dị ukwuu nke ọdụ a Ọ nwere USB Type C na usoro ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ. N'ezie, ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa bụ onye ikwu ebe ọ bụ na a na-akwụ ụgwọ zuru oke n'okpuru awa atọ, obere ihe ọjọọ, karịa ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ịkwụ ụgwọ ekwentị maka ọkara elekere ruru 25-30% nke batrị, karịa karịa iji mee ka anyị pụọ n’agbụ.
N’ikpeazụ Huawei Nova Plus nwere ọnọdụ ịzọpụta ihe ọfụma nke ga - eme ka nhọrọ kachasị dị nkenke na nchapụta na opekata mpe iji nye ekwentị ohere ịlanarị ogologo oge yana pacenti opekempe kachasị.
Igwefoto na-enwu na elu nke kacha mma
N'oge ngosipụta nke ndị ọhụrụ so n'ezinụlọ Nova, onye nrụpụta ahụ lekwasịrị anya na igwefoto ahụ. Nke ahụ dị mma. Na Igwefoto megapixel 16 Huawei Nova Plus nke nwere onyonyo onyonyo, Dual flash na f / 2.0 na-enye ọmarịcha njide.
Ihe oyiyi weghaara nwere ezigbo mma, karịsịa na gburugburu ọkụ nke ọma ebe igwefoto Huawei Nova Plus gosipụtara ikike ya niile. Ugbua n'ime ụlọ anyị na-ahụ ntakịrị enweghị saturation, ọ bụ ezie na ogo ndị nwudoro ka dị ezigbo mma.
Ebe igwefoto Huawei Nova Plus kacha ata ahụhụ bụ mgbe ị na-ese foto abalị. N'okwu a mkpọtụ ahụ na-egosi na, ọ bụ ezie na ọkụ ọkụ na-enyere aka, anyị enweghị ike ịtụ anya ọrụ ebube. Ma n'ikpeazụ, agwaworị m gị nke ahụ igwefoto bụ otu n'ime ike dị ukwuu nke Huawei Nova Plus a.
N'aka nke ọzọ, Igwefoto n'ihu megapixel asatọ ga-atọ ndị hụrụ onwe ha n'anya ụtọ ebe ọ bụ na ọ na-eme ụfọdụ ezigbo mma catches. Achọtala m nhọrọ iji gosipụta ihuenyo ahụ bara uru nke ọma tupu ewere njide iji gosipụta eserese ndị ejiri igwefoto n'ihu, usoro dị mfe nke na-enye nsonaazụ ọma, na-azọpụta gị site na nsogbu karịrị otu, ọkachasị na gburugburu ọkụ na-adịghị mma.
Na ihe niile a anyị ga-atụkwasị a n'ezie igwefoto zuru ezu software. Ngwa ahụ zuru oke nke ukwuu, na-enye usoro nke nhọrọ gụnyere ọtụtụ ohere. Karịsịa ihe kwesịrị ịrịba ama bụ ọnọdụ akwụkwọ ntuziaka nke ga-enyere anyị aka ịhazigharị akụkụ dị iche iche dịka ikpughe, ọsọ ọsọ, nguzo ọcha, ISO na ilekwasị anya n'etiti nhọrọ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị maara foto igwefoto nke Huawei Nova Plus na-enye gị ohere dị iche iche na-adọrọ mmasị. Ọ bụrụ na foto dị mma nke foto abụghị ihe gị, nwee obi ike na igwefoto ọnụ na ọnọdụ akpaka karịrị ezuru. N'ezie, ana m akwado ka ị jiri obere oge gwuo egwu ruo mgbe ị ga-akwụ ụgwọ ya n'ihi na ọdịiche dị na njide ahụ dị ịrịba ama.
Ihe nlere igwefoto emere na Huawei Nova Plus
Huawei arụwo nnukwu ọrụ na Huawei Nova Plus. Aesthetically na ọnụ bụ n'ezie ndị mara mma na mgbe ị bulie ya na ị na-ahụ elu àgwà nke ya risịrị. Akụrụngwa ya ga - enyere gị aka ịnụ ụtọ ọdịnaya ọ bụla ma ọ bụ egwuregwu vidio na - enweghị nsogbu ọ bụla, na mgbakwunye nke ihuenyo 5.5 nke anụ ọhịa na - akpọ gị ka ị mee nke a ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye na igwefoto a dị elu karịa nnwere onwe dị mma, echere m na ekwentị a bụ ngwaọrụ kachasị mma dị n'etiti etiti ahịa ahụ na nke ahụ ga-ezute atụmanya nke ndị ọrụ kachasị achọ. Na n'elu nke o nwere FM Radio!
Naanị mana achọpụtara m bụ ọnọdụ nke ọkà okwu, nsogbu nke siri ike idozi belụsọ ma ị debere ndị ọkà okwu n'ihu na-abawanye ụba ekwentị, yana ọpụpụ n'èzí nke ga-eme ka anyị hụ ihuenyo na-enweghị nsogbu mana nke ahụ ga-abụ ihe dị mkpirikpi ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ekwentị ndị ọzọ.
Agbanyeghị Ana m ekwenye onwe m site na ịsị na ọ bụ otu n'ime ekwentị kacha mma m gbalịrị enwere m ike ijide n'aka na ọ bụ nzụta nke na-agaghị emechu gị ihu, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọ dị na ya Amazon na ọnụahịa nke euro 372. Huawei ji nwayọọ nwayọọ na-achịkwa ka ọ bụrụ onye nrụpụta kacha mma na mbara igwe gam akporo na, mgbe Samsung sụsịrị ngọngọ na Galaxy Note 7 ya, ọ na-apụtawanye ìhè nye m na n'oge na-adịghị anya, onye nrụpụta Asia ga-ewere ọnọdụ mbụ na ụwa site n'aka onye isi egwuregwu ya. , site na ikikere site na Apple.
Ihe osise ihe oyiyi Huawei Nova Plus
Onye edemede: 98%
Isi ihe na ihu ọma
Akwa mma mechara
Igwefoto na-enye arụmọrụ dị mma
Nnwere onwe nke ga-eju gị anya
Ọnụ ego a na-apụghị imeri emeri
Ihuenyo na-ata ahụhụ na gburugburu na-enwu gbaa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Nyocha nke Huawei Nova Plus, ngwaọrụ nke ga-eju gị anya
Anyị na-akwado ndị agha anyị dijo
onye ozo na enweta ihe a?
Zaghachi na Anyị na-akwado ndị agha anyị
Wụpụ ma gbaa ihe niile na - agagharị na mbara igwe a na - akpọ ndị ọbịa
Nke a ga - abụ Samsung Galaxy C9 na - esote